युरोप मा यात्रा को बारे मा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > युरोप मा यात्रा को बारे मा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा
मानौं तपाईं कुनै पनि समय चाँडै यूरोपियन युनियन भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ. त्यो अवस्थामा, त्यहाँ सुझावहरूको एक श्रृंखला छ र महत्वपूर्ण यात्रा जानकारी यसले तपाइँको अनुभवलाई अझ रमाईलो बनाउन मद्दत गर्दछ. एक सोच्न सक्छ कि त्यहाँ वास्तव मा ठूलो फरक हुन सक्दैन युरोप यात्रा गर्न आवश्यक विचार in comparison to any other place in the world. अझै पनि, यसको विशाल विस्तार भित्र, त्यहाँ कानुनी कागजातहरूको श्रृंखला छ जुन तपाईलाई युरोपमा पर्यटकको रूपमा जान आवश्यक पर्दछ. पनि, धेरै फरक मौसम, quirks, र सांस्कृतिक विशेषताहरू दिमागमा राख्नको लागि यो आवश्यक छ.
1. युरोप यात्रा: Grab Ahold Of Your Passport
राहदानी प्राथमिक चिन्ताको विषय हो किनकि यो तपाईको प्रस्तुतीकरण कार्ड र तपाइँको प्राप्त गर्ने देशको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ. हामी पहिले राहदानीको ख्याल राख्नेछौं. तपाईंको प्राथमिकताको सरकारले निर्धारण गर्दछ कि कुन देशहरू तपाईं कुनै पनि विशेष कागजको प्रक्रिया बिना नै प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईको घर र गन्तव्य दूतावासहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेका छन वा जाँच्ने क्रममा सन्धि संधिसम्म रहेको कुरा जाँच गर्नु सधैं उत्तम हुन्छ।. अमेरिका र दक्षिणपूर्व एशियाका धेरै जसो देशहरूले युरोपका अधिकांश देशहरूमा अनियन्त्रित पहुँच पाएका छन्.
यो भनेपछि, यदि त्यो केस हैन भने; कानूनी यात्रा सल्लाहकार पाउनुहोस् जुन तपाईंको यात्रा अनुमतिहरू प्रशोधन गर्दा तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दछ. तपाईंलाई स्वास्थ्य प्रमाणपत्रहरू पनि चाहिन सक्छ र यस्तै पहुँच प्रदान गर्न. यदि तपाईं विदेशमा ड्राइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पनि एक आवश्यक हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभरको अनुमति. यदि तपाइँ व्यापार गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, यात्रा गर्न आवश्यक अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अनुमतिहरू हुन सक्छन्. प्राप्त गर्न देशको सरकारी वेबसाइटमा तपाइँको यात्रा अभिप्राय अनुसार कुन कागजी आवश्यक छ भनेर तपाइँ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ.
2. त्यस अनुसार प्याक गर्न सिक्नुहोस्
युरोप ठूलो र विविध महाद्वीप हो, स्पेनमा घमाइलो Andalucia समुद्री किनारहरु बाट हिउँ पुर्‍याउने टुन्ड्रा सम्म. यो हावालाई मनमा राखेर र विदेशमा तपाईंले गर्नुपर्ने योजनाहरू गतिविधिहरूको साथ प्याक गर्न महत्वपूर्ण छ. याद गर्नुहोस् कि तपाईं प्याक गर्दै हुनुहुन्न तपाईंको देशबाट बाहिर निस्कन, धेरै वा सानो लिनुहोस्; यसले तपाइँले लुगा उठाउँदा कम समय गुमाउनेछ, एयरपोर्टको बाटोमा मद्दत गर्नुहोस्, र पनि तपाईं पैसा बचत द्वारा अधिक वजन शुल्क बेवास्ता गर्दै. तपाईंको यात्रा ब्याग वा सुटकेस सेना शैली व्यवस्थित गर्न उत्तम हो, आफ्नो प्यान्ट रोलिंग, शर्ट, मोजा, र कपडा जस्तै अण्डरवियर र ती सबै एक अर्काको बिरूद्ध मोटो राख्नुहोस्. यसले तपाईंको कपडा फोल्डिंगको समस्याबाट बचाउँछ र तपाईंलाई स्वच्छता उत्पादनहरू वा इलेक्ट्रोनिक्स फिट गर्न ठाउँ बचत गर्दछ. यो टिप पनि उपयोगी छ यदि तपाईं यात्रामा खरीद गरेको लुगाहरू ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने. अर्को राम्रो सल्लाहको टुक्रा तपाईंको उपहार वा शपिंग वस्तुहरूको लागि अतिरिक्त ब्याग प्याक गर्नु हो.
3. युरोप यात्रा: तपाईंको बैंकहरूलाई थाहा दिनुहोस् तपाईं विदेश र खर्चमा हुनुहुनेछ
केहि वर्ष पहिले भएको क्रेडिट कार्ड ह्याकि raको ब्यापारले बैंकहरूलाई जोखिमबाट सावधान गरायो. यसले उनीहरूलाई एक ब्लक स्थापना गर्न नेतृत्व गर्‍यो पहिले सोध्नुहोस् नीति जब उनीहरू एक अनियमित देशमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग भइरहेको देख्दछन्. तपाईंले आफ्नो बैंकमा व्यक्ति-अप देखाउनु पर्छ वा तिनीहरूलाई कल दिनुहोस् जब अनलाईन सूचनाहरू कहिलेकाँही खातामा लिइनन्. यो प्रावधान लिने किनमेल गर्दा हानिकारक र लाजमर्दो अनुभवबाट बच्नेछ. यदि तपाईं बैंकमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ रहँदा केही स्थानीय मुद्रा प्राप्त गर्नु पनि राम्रो विचार हो. एक्सचेन्ज फीस युरोपका अधिकांश पसलहरू र मा पर्यटकहरूको लागि बेवास्ता गरिएको हुन्छ विनिमय पोइन्टहरू.
4. युरोप यात्रा: रिक्यापिटुलेट गर्दै
यदि तपाइँ "पुरानो महाद्वीप" मा जाँदै हुनुहुन्छ भने,”याद राख्नुहोस् तपाईंको कागजात आफैंमा ल्याउन र कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुमतिहरूको लागि भुक्तान गर्नुहोस्. यस प्रकारको कागजपत्र आवश्यक छ यदि तपाईं भित्र फरक देशहरू भ्रमण गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ युरोपियन कानून. यदि तपाईं सडक यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ, यो आवश्यक छ कि एक अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभरको अनुमति हुनुपर्दछ र बुकिंगबाट जोगिनुहोस्. पनि, सम्झना हल्का प्याक र जलवायु र गतिविधिहरू विचार गर्न तपाईं विदेशमा सहनुहुनेछ. सधैं रिपोर्ट गर्नुहोस् कुन देशहरूमा तपाईंले पैसा खर्च गर्ने योजना बनाउनु भएको छ र आधिकारिक संस्थाका साथ मात्र मुद्रा एक्सचेन्ज बनाउनु हुन्छ. अन्ततः, तपाईं बिभिन्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, खाद्य पदार्थ, संस्कृतिहरू, रमाइलो गर्न र अनुभवको आनन्द लिन नबिर्सनुहोस्.
अब तपाईंलाई थाहा पाउनु पर्ने सबै कुरा थाहा छ, we at एक ट्रेन सेव, तपाईंको अन्य सबै ट्रेन आवश्यकताहरूको लागि तपाईंलाई मद्दत गर्न तयार छन्.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा यात्राको बारेमा तपाइँलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा" तपाइँको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feverything-know-traveling-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)